Zimbabwe Election news - latest breaking stories and top headlines - TODAY
Home Topics Zimbabwe Election
Report: Zimbabwean leader Mnangagwa to embark on ‘thank you’ rallies
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has reportedly lined up nationwide "thank you" tours after being voted the country’s president in the just ended disputed polls.
Zimbabwe’s President Mnangagwa vows post-vote violence probe
Zimbabwe’s newly sworn-in President Emmerson Mnangagwa vowed Sunday to open a probe into violence which followed the country’s first election since strongman Robert Mugabe was ousted from power.
Zimbabwe’s President Mnangagwa condemns riot police interruption of press event
Emmerson Mnangagwa, who narrowly won re-election as the president of Zimbabwe in a poll followed by violence and political tension, has condemned a move by riot police to break up a news conference held by his unsuccessful challenger, Nelson Chamisa.
Zimbabwe’s ruling Zanu-PF signals presidential win
Zimbabwe's ruling party is signaling victory in the presidential election and telling the opposition that "we should all lose graciously."
China is calling Zimbabwe's election "orderly" and urges Zimbabweans to maintain peace and stability after Wednesday's violence in the capital left three people dead.
Post-election violence: UN warns Zimbabwe to exercise restraint
The UN has called on Zimbabwe’s leaders to reject any form of violence after reported attacks on demonstrators protesting election results in the country, which have left three people dead.
The European Union observer mission says "a truly level playing field was not achieved" in Zimbabwe's election as the country awaits the results of the presidential vote.
Zimbabwe counts votes after historic post-Robert Mugabe polls
Counting was under way Tuesday in Zimbabwe after a strong turnout in the first election since long-ruling leader Robert Mugabe was ousted from power.
EU: Zimbabwe election ‘totally disorganised’
Zimbabwe’s election, the first since the removal of Robert Mugabe in a de facto coup last year, has in some cases been “very smooth”, in others “totally disorganised”, the European Union chief observer said on Monday, with voting still under way.
Zimbabwe opposition leader votes to cheers
Zimbabwe’s tainted election authority under fire again
Thirty-four years later, Ellis Ndlovu still cannot bear to look at the tree in the schoolyard where Zimbabwean soldiers killed her son.
Zimbabwe opposition chief warns of flawed vote
Zimbabwe's historic election on Monday is likely to be flawed and the opposition will launch peaceful protests if President Emmerson Mnangagwa wins in a disputed vote, the country's main opposition leader said on Friday in an interview with The Associated Press.
Opposition leader Nelson Chamisa on Wednesday said Zimbabwe's election was threatened by fraud and accused electoral authorities of bias, but said his MDC party would not boycott the vote.
Report hints at 900 000 ghost-voters in Zim election
With less than two weeks to go until Zimbabweans head to the polls, a further analysis of the voter's roll has shown that as many as 900 000 records may have been tampered with, to influence the results, according to a report by TeamPachedu.